Hotellọ oriri na ọ Angelụ Angelụ Angel na Palestine na-anabata ndị ọbịa e kepụrụ iche 40 gụnyere ndị America 14
Home » Akụkọ njem » Hotellọ oriri na ọ Angelụ Angelụ Angel na Palestine na-anabata ndị ọbịa e kepụrụ iche 40 gụnyere ndị America 14
Ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ anọ anọla iche iche iche maka ime ihe ha chọrọ na họtel ndị Palestaịn dị nso na Betlehem, na West Bank, n’ihi ntiwapụ nke coronavirus. Ha gụnyere ụmụ amaala America 40, yana ihe dị ka ndị ọbịa 14 na ndị ọrụ Palestine.
Angellọ oriri na ọ Angelụ Angelụ Angel, nke ka ukwuu bụ Christian Beit Jala, dị nnọọ ọdịda anyanwụ nke obodo ebe ekwuru na a mụrụ Jizọs, bụ ebe achọpụtara mmadụ asaa nwere nje a, na-eme ka ha bụrụ ndị mbụ amaara na Palestian Authority, okwu mere ọha ke usenubọk Thursday.
"Mụ na ndị ọrụ m nọ n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ," Maryana al-Arja, onye njikwa, gwara The Media Line.
“Ndị America hapụrụ ụlọ nkwari akụ n'ụtụtụ a, mana ndị uwe ojii njem njem nke Palestine kpọghachitere ha n'ihi na ha enweghị ike idobe [ebe obibi ọzọ]" na mpaghara Betlehem, ka o kwuru. "Mmadụ asaa ahụ butere ọrịa a ma ọ bụ ndị a na-enyo enyo na ha nwere ọrịa dị n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ."
Ọ na-ekwu na ndị ọbịa ụlọ oriri na nkwari akụ niile nọ n'ọnụ ụlọ ndị mmadụ na ndị ọrụ ahụike PA nọ maka ịme ndokwa maka ibuga ha na nlekọta ahụike.
"Ndị America [ndị ọbịa] ahụ maara ọnọdụ ahụ ma na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ nnọchi anya obodo ha," Arja gara n'ihu. “Ndị ọchịchị Israel rịọrọ ka ndị America kewapụ iche ruo ụbọchị iri na anọ tupu a nabata ha n’Izrel. Ruo ugbu a, ọ nweghị ihe nlele sitere na ndị America. Anyị na-akpọ ndị ọrụ ahụike ka ha gwa anyị gbasara atụmatụ ha. ”
Ozi na-ahụ maka nchekwa na Israel nyere iwu ka a kwụsị ịga site na mpaghara ahụ ruo oge ọzọ.
E nwere ugbu a okwu ikpe 17 nke coronavirus na Israel, bụ ebe etinyela usoro siri ike na mbọ iji gbochie mgbasa ahụ.
A na-egbochi ndị mba ọzọ si mba dị iche iche siri ike na Asia na Europe ịbanye na Israel, ebe a na-ezigara ndị Israel si mba ndị ahụ ozugbo ka ha pụọ ​​iche. Ruo ugbu a, a na-eme atụmatụ na ihe ruru mmadụ 100,000 nọ na Israel nọ na nchekwa ndị na-ejide onwe ha.
Otu isi okwu na họtel ahụ na Beit Jala gwara ndị Media Line na ekwentị na "ọnọdụ ụjọ, ọgba aghara na ụjọ" n'ihi enweghị ozi.
“Onweghi onye si na [PA Health Ministry nke bịakwutere anyị; anyị na-enweta ozi sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi [ọ bụ ezie na] ozi dị na mgbasa ozi ọha na eze abụghị nkwenye na ndị mmadụ na-echegbu onwe ha, ”ka isi mmalite ahụ kwuru.
Onye ọzọ nọ ebe ahụ gwara The Media Line na ihe karịrị otu oge, na ya ga-adọ ndị mmadụ na-abanye na họtel ahụ aka ka ha ghara ịla. Ọ gbakwụnyere na otu ndị uwe ojii PA nke kwụgidere n'okporo ámá ahụ emeghị mgbalị ọ bụla iji gbochie ndị mmadụ ịbanye n'ụlọ ọrụ ahụ.
"Ebechibidoro ọnọdụ ahụ nke ọma," ka onye ọzọ na họtel ahụ gwara The Media Line.
"N'oge gara aga, mmadụ batara izute enyi ya n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ bụ onye nọpụrụ iche, olee otu o si nwee ike ịbanye na họtel ahụ na-enweghị akwụsị?" isi iyi gara n'ihu. “Enwebeghị ihe enyemaka ahụike dị ka ihe nkpuchi ihu. Onweghi nri e webatara anyị. Enwere mmadụ iri anọ ebe a. A gwara anyị ka anyị kewapụ mmadụ asaa ahụ a na-enyo enyo na ha nwere coronavirus n'ime ụlọ naanị ha. Ọ bụrụ na otu onye n'ime anyị esi na họtel ahụ pụọ, anyị ga-emetọ obodo a dum. ”
Media Line nwere ike ị nweta Mohammad Awawdeh, onye na-ekwuchitere PA Health Ministry, onye kwuru na mịnịsta ahụ "na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ngwa ngwa ọ nwere ike ịnwale onye ọ bụla ma nye azịza doro anya." Onye ọzọ na-ekwuru ozi ọma, Dr. Dhareef Ashour, wepụtara nkwupụta na mgbede Tọzdee nke na-akatọ ndị mmadụ na-ekwurịta okwu a na nyiwe mgbasa ozi ọha na eze.
Ashour kwuru, "Anyị nwere ugbu a na soshal midia nde ndị nta akụkọ Palestian nde anọ, nke ọ bụla nwere atụmatụ nke ha na nkatọ maka otu esi ejikwa ọgbaghara ahụ."
PA amalitela ịgbasa ọgwụ na-egbu ọrịa na Betlehem na Manger Square ma kwuo na emechila Chọọchị nke Ọmụmụ Kraịst ruo mgbe ọkwa ọzọ.
PA ahọpụtala ogige ụlọ akwụkwọ mahadum Istiqlal dị na Jeriko dị ka ebe dị iche iche, ihe na-agbapụta ndị bi na mpaghara ahụ, na ọtụtụ kwuru na ha emeela ọgba aghara n'okporo ámá, na-emechi ọnụ ụzọ mbata nke obodo ahụ n'akụkụ ugwu nke Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ.
Ndị na-ahazi, nke Media Line ghọtara bụ ndị isi Fatah nke PA President Mahmoud Abbas, na-achọ ka ndị mmadụ kwenye na coronavirus ga-anọ ebe a chọpụtara ha.
Otu n'ime ndị ọgba aghara ahụ gwara The Media Line: “Ọ bụ ọrụ dịịrị Mịnịstrị Ahụike idobe ebe dị mma maka okwu ọ bụla n'ihi na ibuga ha na-eweta ihe ize ndụ nye ahụike nke ndị ọzọ bi.”
Abbas ekwuola ọkwa ọnọdụ mberede ọnwa otu na mpaghara Palestian niile n'ihi coronavirus.
Otu akụkọ dị na Ramallah gwara The Media Line na ndị ndu Palestine were iwe na gọvanọ nke Betlehem maka ụzọ o si achịkwa ọnọdụ ahụ.
"Onye isi oche ahụ [Abbas] na-atụle ịhapụ gọọmentị ọrụ ya," ka isi iyi ahụ kwuru.
by Mohammad al-Kassim / Usoro mgbasa ozi
Ozi site na Nzukọ na Ihe Omume Ndị Isi Ntanetị na Coronavirus